Deepin ngaphambilini Hiweed Linux noma Hiwix iyinhlangano ukusatshalaliswa Linux Chinese for computer ngokusekelwe Debian engazinzile. Ukusatshalaliswa ekuqaleni ngokusekelwe Morphix, kodwa kamuva, ngo- 2005, kwaba kabusha lebhalwako lephatselene Debian ke, ngo- 2010, ngo- Ubuntu kanye kamuva, ngo-2015, ngo- Debian engazinzile. deepin yasungulwa kakhulu Deepin Wuhan Technology Co., Ltd. futhi ukusetshenziswa, ngokuzenzakalelayo, imvelo desktop Deepin Desktop Environment DDE, olwakhiwa usebenzisa ubuchwepheshe HTML5; uhlelo kuhlanganisa nezinye izicelo kuhlanganise DMusic, Deepin Movie, Dee ...
Ngokusemthethweni lendawo ibizwa iRephabhliki yase-Indonesia, iyizwe elise Ningizimu neMpumalanga ne-Asia kanye ne-Oceania. I-Indonesia lineziqhingi ezingu-17.508. Linezifunda ezingu-33 provinces nabantu abaphezulu kwezigidi ezingu-238, futhi liyizwe lesine elidume kakhulu emhlabeni wonke. I-Indonesia iyiRiphubliki, enemithetho kanye nomongameli okhethiwe. Idolobha elikhulu lale sizwe libizwa ngokuthi yi-Jakarta. Izwe labelana ngababhopda wendawo ne-Papua New Guinea, i-East Timor, kanye ne-Malaysia. Amanye amazwe angomakhelwane abandakanya i-Singapore, i-Philippines, i-Australia, kanye nendawo yamaNdiya yeziqhingi ze-Andaman kanye ne-Nicobar. I-Indonesia iyilungu elinikelwayo le-ASEAN futhi iyilungu lezezimali ezikhulu ze-G-20.